Kedu ihe kpatara anyị ji chọọ Magnesium?
Tupu anyị enwee ike ịbanye n’ime Magnesium L-Threonate mgbakwunye nootropic, you nwere ike mkpa ịghọta banyere isi ya ụzọ.
Magnesium bụ micronutrient dị ịrịba ama, nke na-arụsi ọrụ ike n'ọtụtụ usoro ahụ. Ihe mmewere nwere njigide na ike mgbochi na izu ike, njikọ protein, yana ọrụ neuronal. E wezụga nke ahụ, ọ na-edozi shuga dị n'ọbara ma na-ekwusi ọbara mgbali elu.
Ọ bụ ezie na ịnwere ike ịnara Magnesium kwa otu, ọtụtụ n'ime mgbakwunye ndị a na-echekwa ma ọ bụ jikọtara ya na amino acid. Chelation na-eme ka absorption, kwụsie ike, na bioavailability nke mineral dịkwuo mma.
Nchịkọta nke Magnesium dị elu n'ụbụrụ karịa na akụkụ ahụ ọ bụla. Ọ na-agbanwe ịka nká nke ụbụrụ site na ime ka plastic na njupụta synaptic, nke bụ ihe ndị dị mkpa maka nhazi echiche. Magnesium erughi maka ọrịa bipolar, isi mgbaka, ọrịa Alzheimer, nnukwu mmerụ ụbụrụ, schizophrenia, ọdịdọ, ịda mba, n'etiti ọnọdụ ndị ọzọ.
Usoro ọgwụgwọ nke Magnesium na ahụike ahụike abụwo ọkpụkpụ nke esemokwu. Ihe kpatara ya bụ na mineral a anaghị agafe ngwa ngwa ụbụrụ ụbụrụ. Otú ọ dị, nchọpụta ntọala nke Magnesium L-Threonate ntụ ntụ ghọrọ ihe ngwọta kasịnụ nye nsogbu a.
Kedu ihe bụ Magnesium L-Threonate?
Magnesium L-Threonate ntụ ntụ bụ ihe mejupụtara nke mkpụrụ ndụ Magnesium na L-Threonate. Umi okpukpu abụọ dị ka a nootropic na ọgwụ neuroprotective.
Ọdịdị ya laghachiri na 2010 mgbe Guosong Liu na ndị ọkachamara n'ọrịa na Massachusetts Institute of Technology chọpụtara ihe mgbakwunye dị mma nke na-eme ka cognition nwee oke. Tupu nchọpụta a, ndị nchọpụta enweghị ike ịchọpụta otu esi ebu magnesium n'ime ụbụrụ ebe ọ bụ na egbochiri mineral na mgbochi ụbụrụ ọbara.
Ihe mgbakwunye Magnesium L-Threonate bụ ihe sịntetik. Agbanyeghị, ọ dị karịa karịa ihe ọ bụla ọzọ na Magnesium. E wezụga nke ahụ, ọ na-agafe mgbochi nke ụbụrụ ụbụrụ, ya mere, ihe kachasị mma maka ụkọ Magnesium na ụbụrụ. Ngwakọta ahụ na-eme ka ogo magnesium dị na ụbụrụ site na 15%.
Uru magnesium L-Threonate bara ụbụrụ site na ịkwalite neuroplasticity. E wezụga nke ahụ, ọ na-arụkwa ọrụ iji mee ka ụbụrụ na-ebute ụbụrụ, bụ nke dị mkpa na ịkpụzi sel neuronal.
Kedu ihe ejiri Magnesium L-Threonate mee?
Magnesium L-Threonate bara uru ijikwa nsogbu ụbụrụ. Ọgwụ ahụ na - eme ka ụbụrụ magnesium dị na mkpụrụ ndụ ụbụrụ.
Psychonauts zụta Magnesium L-Threonate maka uru nootropic. Ọ na-eme ka ebe nchekwa episodic, mmụta, na ime ka uche dịkwuo elu. Ihe mgbakwunye ahụ bụ ọgwụ ọgwụ edere nye ndị ọrịa na-arịa ọrịa ncheta afọ, ADHD, mgbaka, na ọrịa Alzheimer.
Magnesium L-Threonate bara uru dị ka mgbakwunye nootropics
Kwalite Ọrụ Nghọta
Magnesium na-agafe n'ụzọ mgbochi ụbụrụ ụbụrụ n'ihi ihe mmewere Threonate. Molekal a na-ahụ maka mmụba na njupụta synaptik na nnyefe neuronal.
Inweta Magnesium L-Threonate na-eme ka arụmọrụ uche, itinye uche, na ebe nchekwa na-arụ ọrụ. Dika nyocha ikpe ogwu a na-ebiputa, ndi isi omumu nke were ihe mgbakwunye a kwuputara na mmuta episodic, oru ndi isi, na nlebara anya.
Na-agbagha Brabụrụ inbụrụ
Iji Magnesium L-Threonate weghachite afọ ụbụrụ nke ndị agadi. Ndị ọrụ nyocha gosipụtara na ọgwụ ahụ nwere ike ime ka ụbụrụ rụọ ọrụ afọ itoolu.
Agka nká na-eme ka ụbụrụ synapses belata, na-eduga n'ọjụjụ ọgụgụ isi. Otú ọ dị, ihe mgbakwunye Magnesium L-Threonate na-arụ ọrụ site na igbochi ọnwụ nke synapses ndị a na ime ka nkwalite neuroplasticity dịkwuo mma. E wezụga nke ahụ, ọ na-ejigide ogo ụbụrụ nke magnesium na ọkwa kachasị mma.
Magnesium L-Threonate ADHD mgbakwunye na-ebelata nchekasị na nrụgide nrụgide. Ọgwụ ahụ na-eme ka obi dị gị mma, na-eme ka i nwee nghọta doro anya. Ọ na-arụ ọrụ site na ime ka GABA neurotransmitters na-eme ka ọ kwụsị ọrụ nke kemịkal nchegbu.
Na mgbochi ụbụrụ ọbara, Mmeju nke Magnesium L-Threonate gbochie homonụ nrụgide ịbanye na ụbụrụ.
E wezụga nke ahụ, ọ na-egbochi gị icheta ihe ndị na-emenye ụjọ, ezigbo ihe iyi egwu, na ahụmahụ ndị na-akpasasị uche ndị na-akpali ụjọ.
Ọ bụrụ na ị naghị ehi ụra, ị nwere ike zụta Magnesium L-Threonate maka idozi ehighị ụra nke ọma gị. Ihe mgbakwunye na-eme ka akwara na-eme ka akwara na-eme ka ahụ dị jụụ site na ịhapụ ha calcium. Ọ na-ebelata cortisol na ụfọdụ homonụ nrụgide ndị ọzọ, nke na-egbochi melatonin na ikike ihi ụra.
Nchịkwa nke Ọrịa Neurodegenerative
Ike nke ọgwụ Magnesium L-Threonate ADHD na-agwọ ọrịa ndị na-arịa ọrịa neurodegenerative n'eziokwu na ọnọdụ ndị a jikọtara ala Magnesium dị ala. Neuroscientists jikọtara erughị ala Magnesium na ụbụrụ ADHD, dementia, na Alzheimer.
Kedu ihe ọzọ, ịnara capsules Magnesium L-Threonate ga-egbochi ịda mbà n'obi na ncheta ncheta, nke bụ mmetụta nhụjuanya nke ọrịa dementia ma ọ bụ Alzheimer.
Esi ewepụ Magnesium L-Threonate
Ngwadogwu Magnesium L-Threonate na-adabere na ihe ole na ole, gụnyere mmekọahụ, afọ, na ojiji a chọrọ. Dịka ọmụmaatụ, otu ụdị ọgwụgwọ maka afọ 19 ruo 30 dị ihe dị ka 400mg ebe ụmụ nwanyị ga-eji ihe dị ka 300mg. Onye ọ bụla karịrị afọ 31 nwere ike bulite ọnụọgụ site na 20mg, maka ma nwoke ma nwanyị.
Mgbe ị na-ewere nootropic Magnesium L-Threonate maka ịkwalite cognition, ọgwụ ahụ nwere ike ịgbanye ruo 1200mg kwa ụbọchị. N'adịghị, ọnụego ahụ dabara na 400mg mgbe ị na-eji mgbakwunye ụra Magnesium L-Threonate maka njirimara hypnotic ya.
Mgbe ị na-ewere onyinye a dị ka emeju nri, ị nwere ike iji n’etiti 1000mg na 2000mg kwa ụbọchị. Ọkacha mma, ị ga-ekewa capsules Magnesium L-Threonate ụzọ abụọ na inye ya n'ụtụtụ na obere oge tupu ị lakpuo ụra.
Enwere mmetụta ọ bụla na-ewere mgbakwunye Magnesium L-Threonate?
Ahụkarị nsogbu Magnesium L-Threonate gụnyere isi ọwụwa na ụra. Ihi ụra bụ ngọzi na-agbanwe, dabere n'ọnọdụ gị. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị na-alụ ọgụ maka ehighị ụra nke ọma, ọgwụ ụra Magnesium L-Threonate ga-enyere gị aka ijide ntabi anya.
Ihe mgbakwunye a nwekwara ike igbochi arụmọrụ nke ụfọdụ ọgwụ ndị ọzọ. Nwere ike ịgakwuru dọkịta gị mgbe ị na-a antibioticsụ ọgwụ nje, ahụ ike, ndị na-edozi ọbara, ma ọ bụ ọgwụ mgbali elu. Ihe kpatara ya bụ na magnesium nwere ike ịla azụ na pharmacodynamics.
Magnesium L-Threonate ntụ ntụ na-eji na ngwa
Magnesium L-Threonate bụ ike nootropic. Ọ na-akwalite nhazi ncheta, mmụta, na nlebara anya. Maka nke a, ọ bụ ọgwụ edepụtara maka ijikwa ọnọdụ neurodegenerative.
Magnesium L-Threonate ọgwụ ọgwụ na-agbanwe ntutu isi nwoke. Ngwakọta L-Threonate na-ebelata ike nke mmiri dihydrotestosterone (DHT), nke na-akpata ntutu isi.
Kedu ihe ọzọ, ndị mmadụ nwere nsogbu ịrahụ ụra nwere ike iji ọgwụ a mee ihe maka ịrahụ ụra. Ọ bụghị naanị na ọ na-eme ka mọzụlụ dị jụụ kamakwa ọ na-eme ka ahụ dị jụụ mbenata nchekasị na ịda mba. Ntughari site na nyocha nke Magnesium L-Threonate na-akwado na ọtụtụ ndị ọrụ ga-enwe ụra ụra obere oge mgbe ha nyechara mgbakwunye ahụ.
Ebe ịzụta ntụ ntụ Magnesium L-Threonate
O nwere ike ịbụ na ị rapaara na Magnesium L-Threonate ebe ị ga-azụta nduzi, na-eche na nnweta nke ihe nchekwa nootropics bụ iwu akwadoghị n'ọtụtụ steeti. Ọfọn, oge eruola ka ị tụlere ịzụta ihe Mmeju site na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị dị mma.
Anyị n’onwe anyị na-emepụta ngwaahịa anyị niile na ụlọ ọrụ nyocha adịghị mma. Nwere ike ịchekwa ọzọ site na ịzụ magnesium L-Threonate ntụ ntụ na nnukwu.
Gịnị bụ Magnesium L-Threonate dị mma maka?
Mbadamba Magnesium L-Threonate na-akwado ọrụ ọgụgụ isi na ebe nchekwa. N'adịghị ka ndị ọzọ ụdị magnesium, onyinye a nwere ike igbochi ụbụrụ ụbụrụ ọbara. Ọ bụ neuroprotective nootropic.
N'ikwu nke a, ndị ọrịa na-alụso ọrịa neurodegenerative ọgụ nwere ike ịzụta Magnesium L-Threonate maka ijikwa ọnọdụ ha.
Kedu mgbe m kwesịrị iji Magnesium L-Threonate?
Ikwesiri iwere mmeju a ututu na tupu ihi ura. Otu n'ime Magnesium L-Threonate mmetụta dị n'akụkụ bụ dizziness. N'ihi ya, ọ dị mma ka ị na-enye ya n'abalị.
Kedu ụdị Magnesium kachasị mma?
Enwere ụdị ihe karịrị ise Mmeju nke magnesium, nke na-arụ ọrụ dị iche iche. Yabụ, mmasị gị kwesịrị ịdabere na usoro ọ bụla ịchọrọ ijikwa. Were, dịka ọmụmaatụ, Magnesium L-Threonate bụ nhọrọ kachasị mma maka onye ọ bụla nke na-eme ka cognition nwee ọganihu ma na-eme ka ụbụrụ ha rụọ ọrụ.
N'adịghị ka ndị ibe ya, Magnesium L-Threonate ọgwụ ọgwụ na-atụ ụjọ nwere nnukwu bioavailability yana mgbakwunye nke ịgafe mgbochi ụbụrụ ọbara.
Magnesium L-Threonate ọ dị mma maka nchekasị?
Iwere mbadamba Magnesium L-Threonate ga-eme ka ọnọdụ gị belata, belata nchekasị, ma belata nchekasị. Mmetụta dị jụụ ya na-eme ka ọ bụrụ ọgwụ nchegbu na-adịghị mma.
Magnesium L-Threonate ọ dị mma maka ọbara mgbali elu?
Magnesium L-Threonate nwere ike ịrụ ọrụ dị ka onye na-egbochi ọwa calcium. Ọgwụ ahụ ga-eme ka ọbara mgbali elu belata ruo 5.6 / 2.8mm Hg. Nnyocha na-ekwusi ike na ọ na-egbochi ọrịa obi dịka ọrịa strok, ọbara mgbali elu, akwara obi, na arrhythmias gbasara obi.
Ihe mgbakwunye nke usoro ọgwụgwọ Magnesium L-Threonate bụ na ị nwere ike inye ya ọtụtụ ọgwụ mgbochi ọbara.
Ogologo oge ole Magnesium L-Threonate na-arụ ọrụ?
Uru magnesium L-Threonate ga-apụta ìhè mgbe otu ọnwa gachara, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị na-echekwa ego maka mgbakwunye maka cognition. Ọ chọrọ ọ dịkarịa ala izu anọ ka ọ bulie ogo magnesium na ụbụrụ, nke kwesịrị ekwesị maka nhazi ncheta.
Ọ bụrụ na ị na-emeso ehighị ụra nke ọma, mgbakwunye ahụ ga-arụ ọrụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ozugbo. Maka nchegbu, ịda mbà n'obi, na nsogbu nrụgide post-traumatic, nyocha Magnesium L-Threonate na-akwado na a na-ahụpụta nsonaazụ ya n'otu izu.
Shen, Y., et al. (2019). Ọgwụgwọ Magnesium-L-Threonate Na-ebuli Ọkwa Magnesium na Cerebrospinal Fluid na Attenuates Motor Deficits na Dopamine Neuron Loss na Mouse Model nke Parkinson's Disease. Ọrịa Neuropsychiatric na Ọgwụgwọ.
Slutsky, I., et al. (2010). Mmezi nke Mmụta na Nchekwa site na Mbuli Brain Magnesium. Mpịakọta 65, Nke 2, p143-290.
Mickely, AG, et al. (2013). Diet Magnesium-L-Threonate Dietary na-eme ka mkpochapu ma na-ebelata mgbake onwe onye nke ihe omuma. Nkà ọgwụ, biochemistry, na akparamagwa, Mpịakọta 6, p16-26.
Wei, Li et al. (2014). Ọdịdị nke Brain Magnesium Na-egbochi Mfu Synaptik ma Na-emezigharị Nghọta Nchọpụta na usekpụrụ Mkpụrụ Alzheimer. Bụrụ Brain.
Zarate, Carlos et al. (2013). Ihe ngosi ohuru maka ogwugwo Nsogbu. Akwụkwọ akụkọ nke New York Academy of Sciences.
Wroolie, TE, et al. (2017). Ọnwụnwa mepere emepe nke Magnesium L-Threonate na ndị ọrịa nwere mgbaka. Innovation na nká, Mpịakọta 1.
MAGNESIUM RAW (2R, 3S) -2,3,4-TRIHYDROXYBUTANOATE PATIJI (778571-57-6)
1.Gịnị mere anyị ji chọọ Magnesium?
2.Gịnị bụ Magnesium L-Threonate?
3.Gịnị ka eji eme Magnesium L-Threonate?
4.Magnesium L-Threonate na-erite uru dị ka mgbakwunye nootropics
5.Etu ị ga-esi nweta Magnesium L-Threonate
6.Anwere mmetụta ọ bụla na-ewere mgbakwunye Magnesium L-Threonate?
7.Magnesium L-Threonate ntụ ntụ na-eji na ngwa
8.Ebe ịzụta Magnesium L-Threonate ntụ ntụ